2 Samuel 19 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Samuel Nhoma a Ɛto So Abien 19:1-43
Dawid suu Absalom (1-4)
Yoab kaa Dawid anim (5-8a)
Dawid san baa Yerusalem (8b-15)
Simei srɛɛ bɔne fakyɛ (16-23)
Ɛbɛdaa adi sɛ Mefiboset nyɛɛ bɔne (24-30)
Ɔhyɛɛ Basilai anuonyam (31-40)
Akasakasa baa mmusuakuw no ntam (41-43)
19 Wɔkɔka kyerɛɛ Yoab sɛ: “Ɔhene resu, na ɔredi Absalom wu no ho awerɛhow.”+ 2 Enti nkonimdi* a ɛbaa saa da no dan awerɛhow maa mmarima no nyinaa, efisɛ wɔtee sɛ ɔhene resu ne ba no. 3 Saa da no, mmarima no baa kurow no mu+ dinn sɛnea nnipa a wɔadi nkogu wɔ ɔko mu de aniwu guan no. 4 Ɔhene de ade kataa n’anim, na ɔkɔɔ so sui denneennen sɛ: “Me ba Absalom! Absalom, me ba yi, me ba yi!”+ 5 Na Yoab baa ɔhene nkyɛn wɔ ofie hɔ bɛkae sɛ: “Wo nkoa a wɔagye wo nkwa,* na wɔagye wo mma mmarima,+ wo mma mmea,+ wo yerenom, ne wo mpenafo*+ nso nkwa* no, ɛnnɛ woahyɛ wɔn nyinaa aniwu, 6 efisɛ woadɔ w’atamfo na woatan w’adɔfo. Ɛnnɛ woakyerɛ sɛ asahene ne nkoa nyɛ hwee mma wo; ɛnnɛ na mahu sɛ, sɛ Absalom anwu na yɛn a yɛaka nyinaa wuwui a, anka wopɛ. 7 Afei sɔre pue, na pɛ asɛmpa bi ka kyerɛ wo nkoa fa hyɛ wɔn nkuran,* efisɛ meka Yehowa ntam sɛ, sɛ woampue a, obiara rentena wo ho anadwo yi. Anka nea ɛbɛto wo no bɛkyɛn bɔne a aba wo so fi wo mmeranteberem de abedu sesɛɛ no nyinaa.” 8 Enti ɔhene sɔre bɛtenaa kurow no pon ano, na wɔkɔka kyerɛɛ nnipa no nyinaa sɛ: “Ɔhene abɛtena kurow no pon ano.” Ɛnna nkurɔfo no nyinaa baa ɔhene anim. Nanso Israel de, na wɔaguan ama obiara kɔ ne fi.+ 9 Nnipa a wɔwɔ Israel mmusuakuw nyinaa mu ne wɔn ho hamee, na wɔkae sɛ: “Ɔhene na ogyee yɛn fii yɛn atamfo nsam,+ na ɔno ara nso na ogyee yɛn fii Filistifo nsam; seesei Absalom nti waguan afi asaase yi so.+ 10 Na Absalom nso a yɛsraa no sii yɛn so hene no,+ wawu wɔ ɔko no mu.+ Enti afei adɛn nti na monkɔfaa ɔhene nsan mmae?” 11 Ɔhene Dawid soma kɔka kyerɛɛ ɔsɔfo Sadok+ ne ɔsɔfo Abiatar+ sɛ: “Monkɔka nkyerɛ Yuda mpanyimfo+ sɛ, ‘Adɛn nti na moretwentwɛn mo nan ase sɛ mobɛba abɛfa ɔhene asan akɔ ne fi, bere a Israel nyinaa de nkra abrɛ ɔhene wɔ baabi a ɔte no? 12 Me nuanom ne mo; me nnompe ne me honam ne mo.* Adɛn nti na moretwentwɛn mo nan ase sɛ mobɛba abɛfa ɔhene asan akɔ?’ 13 Amasa+ nso, monka nkyerɛ no sɛ, ‘Ɛnyɛ me nnompe ne me honam ne wo? Efi nnɛ rekɔ, sɛ woammɛyɛ ɔsahene ansi Yoab ananmu a, Onyankopɔn ntua me ka na ɔnsan mfa bi nka ho.’”+ 14 Na onyaa* Yuda mmarima nyinaa koma ma wɔyɛɛ baako, enti wɔsoma kɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Wo ne wo nkoa nyinaa, monsan mmra.” 15 Ɔhene san n’akyi bae beduu Yordan ho. Yudafo nso kɔɔ Gilgal+ sɛ wɔrekohyia ɔhene na wɔde no atwa Yordan. 16 Ɛnna Benyaminni Gera ba Simei+ a ofi Bahurim no yɛɛ ntɛm ne Yuda mmarima no kɔe sɛ wɔrekohyia Ɔhene Dawid. 17 Ɔrekɔ no, Benyaminfo mmarima 1,000 kaa ne ho kɔe. Ná Saul fi akoa Siba+ ne ne mma mmarima 15 ne ne nkoa 20 nso ka ne ho. Wɔyɛɛ ntɛm kotwaa Yordan ansa na ɔhene reba. 18 Na ɔfaa* baabi a wɔfa twa nsu no sɛ ɔrekɔfa ɔhene fifo de wɔn atwa nsu no na wayɛ nea ɔhene pɛ biara ama no. Na Gera ba Simei bɛkotow ɔhene anim bere a ɔrebetwa Yordan no. 19 Ɛnna ɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Mma me wura mmmu me fɔ, na nkae bɔne a w’akoa yɛɛ wo+ da a me wura ɔhene fii Yerusalem kɔe no, na mma ɔhene mmfa nnhyɛ ne mu. 20 W’akoa nim sɛ wayɛ bɔne, enti na ɛnnɛ madi Yosef fi nyinaa kan abehyia me wura ɔhene yi.” 21 Ɛhɔ ara na Seruia ba Abisai+ kae sɛ: “Nea Simei yɛe no, ɛnyɛ owu na ɛfata no? Efisɛ ɔdomee nea Yehowa asra no.”+ 22 Nanso Dawid kae sɛ: “Mo Seruia mma, asɛm yi fa mo ho bɛn a enti moasɔre atia me nnɛ yi?+ Ɛnnɛ yɛ da a ɛsɛ sɛ wokum obi wɔ Israel? Enti minnim sɛ midi hene wɔ Israel nnɛ?” 23 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ Simei sɛ: “Worenwu.” Afei ɔhene kaa no ntam.+ 24 Saul banana Mefiboset+ nso behyiaa ɔhene. Ɔno de, efi da a ɔhene kɔe besi da a ɔbae asomdwoe mu no, na ɔnhohoroo ne nan ho mmubuu ne mmɔwerɛw. Afei na ontwitwaa ne mfemfem nhoroo ne ntaade. 25 Bere a ɔbaa* Yerusalem behyiaa ɔhene no, ɔhene bisaa no sɛ: “Mefiboset, adɛn nti na wo ne me ankɔ?” 26 Ɛnna ɔkae sɛ: “Me wura ɔhene, me somfo no+ na ɔdaadaa me. W’akoa kae sɛ, ‘Ma menhyehyɛ afurum na mentena so ne ɔhene nkɔ,’ efisɛ w’akoa yɛ obubuafo.+ 27 Nanso ɔbɛsɛee w’akoa din kyerɛɛ me wura.+ Na me wura ɔhene de, wote sɛ nokware Nyankopɔn no bɔfo, enti nea eye ma wo biara, yɛ. 28 Anka me wura ɔhene betumi akunkum me papa fifo nyinaa, nanso wode w’akoa aka wɔn a wodidi wɔ wo pon so no ho.+ Enti hokwan bɛn na mewɔ sɛ mɛsan asu akyerɛ ɔhene?” 29 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ: “Adɛn nti na woda so ara ka ho asɛm? Masi gyinae sɛ, wo ne Siba nkyɛ asaase no.”+ 30 Na Mefiboset ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Seesei a me wura ɔhene asan aba ne fi asomdwoe mu yi, ma ɔmfa ne nyinaa mpo.” 31 Na Gileadni Basilai+ fi Rogelim baa Yordan mpɔtam hɔ sɛ ɔrebegya ɔhene kwan akɔ Asubɔnten Yordan ho. 32 Ná Basilai anyin paa, na wadi mfe 80; bere a ɔhene wɔ Mahanaim no, ɔno na na ɔma no aduan,+ efisɛ na ɔyɛ ɔdefo paa. 33 Enti ɔhene ka kyerɛɛ Basilai sɛ: “Wo ne me ntwa nkɔ, na mɛma woanya w’ano aduan wɔ Yerusalem.”+ 34 Nanso Basilai ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Me nkwa nna* a aka yɛ ahe na me ne ɔhene akɔ Yerusalem? 35 Seesei madi mfe 80.+ Metumi ahu nea ɛyɛ papa ne nea ɛyɛ bɔne? W’akoa bɛte nea midi ne nea menom dɛ? Anaa mɛte mmarima ne mmea nnwontofo nne bio?+ Adɛn nti na ɛsɛ sɛ w’akoa kɔyɛ adesoa ma me wura ɔhene? 36 Yordan ho a w’akoa de ɔhene abedu no ara dɔɔso ma me. Adɛn nti na ɔhene de akatua a ɛte sɛɛ rema me? 37 Mesrɛ wo, ma w’akoa nsan na ma minwu wɔ me kurom, baabi a ɛbɛn me papa ne me maame amusiei.+ W’akoa Kimham+ ni. Ma ɔne me wura ɔhene ntwa nkɔ, na nea eye ma wo biara, yɛ ma no.” 38 Ɛnna ɔhene kae sɛ: “Kimham ne me betwa akɔ, na nea eye ma wo biara, mɛyɛ ama no; nea wobɛka biara, mɛyɛ ama wo.” 39 Afei nnipa no nyinaa fii ase twaa Yordan, na ɔhene nso twae. Ɔhene few Basilai afono ho,+ na ohyiraa no. Ɛnna Basilai san n’akyi kɔɔ ne kurom. 40 Bere a ɔhene twa kɔɔ Gilgal+ no, Kimham ne no kɔe, na Yudafo nyinaa ne Israelfo fã nso ne ɔhene kɔe.+ 41 Ɛnna Israel mmarima nyinaa baa ɔhene nkyɛn, na wobisaa ɔhene sɛ: “Adɛn nti na yɛn nuanom Yuda mmarima no wiaa wo sɛ wɔde ɔhene ne ne fifo ne Dawid mmarima a wɔka ne ho nyinaa betwa Yordan?”+ 42 Ɛnna Yuda mmarima nyinaa buaa Israel mmarima sɛ: “Efisɛ yɛn na ɔhene no yɛ yɛn busuani.+ Adɛn nti na moama asɛm yi ahyɛ mo abufuw? Yɛadidi ɔhene ho, anaa wakyɛ yɛn biribi?” 43 Nanso Israel mmarima ka kyerɛɛ Yuda mmarima sɛ: “Yɛwɔ kyɛfa du wɔ ahenni no mu, enti Dawid yɛ yɛn hene sen mo. Adɛn nti na moabu yɛn animtiaa? Ɛnyɛ yɛn na anka ɛsɛ sɛ yedi kan kɔfa yɛn hene ba?” Nanso Yuda mmarima ano boroo Israel mmarima so.*
^ Anaa “nkwagye.”
^ Tete mmere mu no, na wɔyɛ mmea a wɔto aware so, kyerɛ sɛ, mmea a nkurɔfo aware wɔn aka wɔn yere ho.
^ Nt., “fa dwudwo wɔn bo.”
^ Anaa “yɛyɛ mogya koro.”
^ Nt., “ɔdan.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wɔfaa.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Bere a ofii.”
^ Nt., “Me mfe nna.”
^ Anaa “Yuda mmarima ano yɛɛ den sen Israel mmarima.”